Vaovao - Ny vaovao farany momba ny valanaretina manerantany
Tamin'ny faha-21, nisy mihoatra ny 180.000 fanampiny fanampiny manerantany, ny andro be indrindra hatramin'ny nitrangan'ny fipoahan'ny.
Tamin'ny ora faha-22 tany an-toerana, ny filohan'ny tetik'asa vonjy taitra momba ny fahasalamana ao amin'ny WHO Michael Ryan dia nilaza fa ny fiparitahan'ny pnemonia avonavona vaovao any amin'ny firenena maro izay misy mponina betsaka dia mitombo ny tranga vaovao manerantany. Ny sasany amin'izany dia vokatry ny fitomboan'ny isan'ny fitsapana, saingy tsy io no antony lehibe. Ny isan'ny fidirana hopitaly sy ny maty dia mitombo ihany koa, izay manondro fa ny virus dia tsy nitsaha-nitombo hatrany amin'ny sehatra manerantany.
Ankoatr'izay, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nilaza fa ny isan'ireo tranga vao voamarina fa voan'ny pnemonia vaovao any Etazonia dia vao haingana izay na nateraky ny famerenana amin'ny laoniny ara-toekarena.
"Mazava fa ny fitomboan'ny fahaizan'ny fitsapana dia tsy manazava tsara ny fitomboan'ny tranga. Misy porofo ankehitriny fa mitombo koa ny tahan'ny hopitaly. Rehefa esorina ny famerana ny quarantine dia mety hitarika vokatra toy izany," WHO Health Emergency Emergency Ny talen'ny fampiharana Michael Ryan dia nilaza tamin'ny haino aman-jery. Nilaza i Ryan fa ny fahitana ilay tatitra dia nanondro ny fitomboan'ny isan'ny tanora amin'ity tranga ity. "Azo heverina fa noho ny fivezivezena avo lenta an'ny tanora mponina dia manararaotra ny fameperana izy ireo hanombohana mivoaka." Nasongadin'i Ryan fa ny WHO dia nampahatsiahy hatrany hatrany fa rehefa nofoanana ny filaharan'ny quarantine dia niseho ny "tranga mitombo" amin'ny toerana maro manerantany. Ny talen'ny jeneralin'ny WHO Tan Desai dia nilaza tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa tamin'ny faha-21, misy tranga 183000 mahery vao voan'ny aretina eran'izao tontolo izao, no be indrindra hatramin'ny nitrangan'ny valanaretina.